Ungasarudza sei Laptop: makiyi ekudzivirira kukanganisa mukusarudza kwako. | Linux Vakapindwa muropa
ari makombiyuta anotakurika Ivo vaenda kubva pakuve yakasarudzika yakasarudzika chigadzirwa uye chete kune avo vaida kufamba kuti vangangoita se "default" makomputa kune vazhinji nekuda kwehukuru hwavo uye kuita kwakanaka nhasi. Kutengesa kwerudzi urwu rwezvigadzirwa kwakakwidza pamusoro pemakomputa edesktop, kunyange hazvo vaine zvikaipira kana zvichienzaniswa navo, senge izvo hazvina mwero uye kuti kutsiva chikamu kana kuwedzera chakanyanya kuomarara kana kusakwanisika mune dzimwe nguva (kana machipisi zvinotengeswa). Nekudaro, mutengo werudzi urwu rwemidziyo wadonha zvakanyanya, kubva pakuve wakakosha kupfuura makomputa edesktop kuva nemidziyo yakanaka kwazvo yemitengo yakaderera zvikuru.
Vazhinji vashandisi kuti hunhu hweLaptop hwakakwana uye kana vachitenga chishandiso chitsva vanongotarisa muchina unotakurika michina yekufambisa kwavo, dhizaini, saizi diki kana nyaradzo kana uchiitora chero kwaunoda kana kuiendesa kukamuri. sarudza mumba mako. Vagadziri vakazviona izvi uye vakabheja zvakanyanya pamhando iyi yemidziyo, vachitangisa kuwanda kwemhando dzakasiyana nemhando. Ndosaka paine zvimwe zvakawanda zvigadzirwa zvekusarudza kubva nhasi, uye kwete-saka-vemberi vashandisi vanogona kuzviwana zvakaoma kuita sarudzo yakanaka. Kana iri yako kesi, usanetseke, mune ino gwaro iwe unodzidza zvese zvaunoda kuti uite kutenga kwakanaka kunoenderana nehomwe yako uye zvaunoda...
1 Mhando dzemalaptop nemitengo
1.3 Zvakajairika malaptop
1.4 Kubhejera malaptop
1.5 Laptops ebhizinesi
2 Zvimiro zvatinofanira kuongorora
2.4 Dhivha yakaoma
2.7 Dhizaini uye zvigadzirwa
3 Linux inoenderana
Mhando dzemalaptop nemitengo
Imwe yekutanga kusazivikanwa yatinayo kana zvasvika pakuziva ndeipi laptop yekutenga, ndiyo mhando yekomputa yatinoda. Parizvino unogona kuwana mhando dzakasiyana dzemalaptop, pasina kuverenga mahwendefa uye phablets, uye kunyangwe mune yese-mune-imwe, sezvo isu tichigona kusiira izvo kune imwe chinyorwa. Asi mukati memalaptop unogona kuwana:
Iwo madiki, akadhura uye akareruka. Mutengo weizvi unogona kuve pakati peanopfuura kungodarika 200 euros uye € 400 zvinoenderana nekugadzira uye modhi. Muzhinji, ivo havawanzo kuva nezvikwiriso zvakakura kupfuura gumi kana gumi neshanu- uye mapurosesa ayo avanowanzo sanganisira iwo emhando dze AMD E-Series, Intel Atom, ARM, nezvimwe. Ndokunge, Hardware ine mwero isingatenderi iwe kumhanyisa software inoda kushanda kwakanyanya kana kutarisira kuitiswa zvakanaka mune zvimwe zviitiko, asi kushandiswa kwayo kwakaderera kunoreva kuti kuzvitonga kwayo kwemaawa mashoma.
Mienzaniso yemanetbook aya ndeemhando dzakasiyana dzeASUS Eee PC, Acer Aspire One, HP Mini, Dell Inspirion Mini, nezvimwe.
Ivo vanowanzo kuve neyakagadzirirwa dhizaini, ine mhando yezvinhu (aluminium, magnesium, kana mamwe marudzi esimbi), ane akaonda matete. Aya malaptop haana kureruka uye kuonda kwawo kunoita kuti ave nharembozha. Masikirini emasikirini akakomberedza 11 kusvika ku13 ″ muhukuru, uye mune idzi kesi, iyo Hardware yavanayo inowanzo kuve ine simba.
Mitengo yeaya ma ultrabooks inogona kubva kubva ku € 600 kusvika kune inopfuura € 1000 zvinoenderana nezvauri kutsvaga. Kuzvimiririra kwayo kunowanzo kuve kwakakwirira, saka inogona kunge iri sarudzo yakanakisa kana iwe uchida timu yekunze-nzira yakakodzera kune vazhinji vashandisi ...
Iwo akajairwa malaptop, ndokuti, ane masikirini masikisi pakati pe15 - kusvika 17 ″, kunyangwe paine panogona kunge paine mamwe madhijitari asiri aya. Ivo havana kunyanya kuonda, asi havana kunyanya kurema michina. Kune rimwe divi, dhizaini yemhando iyi yemidziyo inowanzo kuregedzeswa, iine zvinhu zvinowanzo kuve zvepurasitiki yekasi yayo, kunyangwe paine zvekare emhando yepamusoro ane magnesium alloys, aluminium, nezvimwe.
Mutengo waro unogona kutangira kubva ku € 400 kusvika ku € 700 kana € 800, zvinoenderana ne Hardware yavanosanganisira. Kazhinji, iwe unogona kuwana akawanda mamodheru aunosarudza kubva, aine akawanda kana mashoma mashandiro epamusoro. Ichokwadi chimwe cheakanakisa sarudzo kune vazhinji vashandisi, pamwe neayo maabooks, kunyanya kana iwe usiri kunyanyo kunetseka nezve dhizaini uye unoda laptop ine yepamusoro hardware uye nemutengo wakaderera uchienzaniswa nema ultrabook ane zvakafanana maitiro.
Vazhinji vagadziri vakaburitsa mitsara yemalaptop inoitirwa nyika yekutamba. Kuti umhanye mitambo yemavhidhiyo zvakanaka unoda Hardware ine simba kwazvo uye ndizvo zvavakaita. Mukutsinhana nezvikomborero izvi, kufamba kwavo uye kuzvimiririra kwavo kwakadzikira zvakanyanya, ndiko kuti, usatarisira kuti rudzi urwu rweLaptop rine bhatiri rinogara kwenguva refu (zvirinani kugara uchitakura chaja iripedyo) uyezve kuti iwo akareruka . Iwo masikirini avanobatanidza anowanzo kuve akakura kwazvo, 17 ″, uye ukobvu hwakakwira kupfuura zvakajairika malaptop okusanganisa iwo ane simba kwazvo Hardware uye ari nani kutonhora masisitimu Mitengo yerudzi urwu rweLaptop inogona kubva kubva ku600 Euro kana € 700 kusvika € 1000 uye kunyangwe € 2000 mune dzimwe nguva.
Mitengo yavo inogona kuve yakanyanya kusiyana, kubva pa400 kusvika 1000-isinganzwisisike euros. Izvo zviyero zvavo zvinogona zvakare kusiyana zvakanyanya, asi zvakajairika zvakakura. Iwo makambani anovhura aya mhando dzemamodeli akashandura mitsara yavo kugutsa nharaunda dzebhizinesi.
Mukati memhando idzi ivo vakaonekwawo munguva pfupi yapfuura izvo zvinonzi "zvinoshandurwa"ndiko kuti, malaptop ane chekubata chinovhara chinogona kubviswa kuitira kuti chishandurwe kuita hwendefa uye chishandiswe pasina keyboard.
Nenzira, sezano rako pachako, nguva dzose dzivisa mamodheru kana akasiyana edhisheni yemhando. Kazhinji, ivo vanowanzo shandisa zvakajairika Hardware, asi iine yakasarudzika dhizaini iyo inokwana chikonzero chekukwiridzira mitengo zvakanyanya. Semuenzaniso, Acer yaive neiyo Ferrari modhi iyo, nekuti ine logo yeiyo ingano mota brand uye ine dhizaini mutsvuku uye kutevedzera kabhoni fiber, mutengo wakakwira kupfuura $ 1000 kana kupfuura € 2000 mune zvimwe zviitiko.
Kune rimwe divi, Hardware yayo, iyo inonyanya kukosha, yanga isiri yepamusoro peyemhando yechiratidzo chimwe chete chakatengwa pakati pe € 500 ne € 600. Kutendeseka, kunze kwekunge uine mari inopfuura inokwana, ini handimbokurudzira kutenga michina iyi kana iwe unenge uine hurombo ...
Zvimiro zvatinofanira kuongorora
El Hardware kana maficha Laptops ndicho chechipiri chinhu chaunofanira kutarisa kana uchinge wasarudza mhando yemidziyo iwe yaunofarira zvinoenderana nezvaunoda. Paunenge uchinge wajekesa pane izvo, ini ndinokurudzira kuti uongorore zvakasiyana zvakasiyana zvakakosha izvo zvine laptop.
Patinoisa komputa yedesktop, kazhinji ini ndinogara ndichigara Ini ndinosarudza iyo Hardware chinhu nechinhu uye ini ndinongoona maviri kana matatu mamakisi egumbo rimwe nerimwe. Ini ndagadzira mhando yezvinyorwa pamwe nezvidimbu uye mune yangu ruzivo ini ndinogara ndichisarudza mamwe marangi. Kuongorora kwakasiyana pamusika kunondibatsira kugadzirisa iro rondedzero, nekuti mhando kana mabhenefiti anogona kuchinjika sezvandichatsanangura ikozvino. Asi chokwadi, kana tichitaura nezve laptop, kusarudza chinhu nechinhu hachigone uye isu tinofanirwa "kumedza" izvo izvo zvaidiwa nemugadziri wemidziyo.
ari mhando, ini ndoda kuzvijekesa, hadzisi nguva dzose chivimbo chehunhu. Ndokusaka ndati icho chinhu chinoshanduka. Ini ndichatsanangura kwauri kwenguva pfupi. A brand X inogona kunge iri nyowani uye ichiedza kuvhura niche mumusika, uye inoita saizvozvo pahwaro hwehunhu. Kana ikangozvisimbisa pamusika uye yawana zvinangwa zvayo zvekutengesa kana purofiti, zvakajairika kuti hunhu hwayo hunotanga kudzikira. Vatengi vakatorekodha iyo brand senge yakafanana nehunhu, uye kunyangwe paine yakaderera mhando mudanho nyowani rekambani X, haufungidzire izvo kuvimbika kwevamwe vatengi kunogona kufuratira. Uye izvi zvakaitika nemamwe emhando dzakakosha ...
Naizvozvo, nguva pfupi yapfuura ndaikuudza kuti kusarudza iyo Acer modhi inogona kunge iri sarudzo yakanaka, ikozvino pamwe handingakurudzire iyo mhando pamusoro pevamwe. Pane kudaro, ndanga ndichinyanya kufarira kuti ASUS irikuita sei zvinhu nguva pfupi yadarika. Asi izvi hazvireve kuti iyi femu inoramba iri imwechete gore rinouya, rinotevera kana makore mashanu kubva zvino. Ndinokukurudzira kuti uverenge zvimwe reability ongororo kana kuvimbika kuri mumambure kana mimwe mishumo yeOCU kana zvimwewo. Izvi zvinogona kukubatsira iwe kusarudza zvigadzirwa zvemhando yepamusoro mugore rauri kuda kutenga iyo laptop.
Kunyange zvakadaro kana iwe uri mutambi Uye iwe unoronga kuwana nyowani nyowani nguva nenguva, pamwe iwe unogona kufuratira zvachose kuvimbika, zvakakwana, iyo garandi ichagara makore maviri uye izvo zvingango fukidza zvinopfuura zvakakwana iyo nguva yaunoda kushandisa chigadzirwa.
AMD kana Intel, ndiyo dambudziko rinowanzoitika. Chokwadi ndechekuti mune zvese zviitiko iwe unenge uchiita sarudzo yakanaka kana izvo zvaunoda zviri kuita. Sezvo iwe uchinyatso kuziva, mamwe mamodheru anoita kupfuura mamwe. Kakawanda uye ma cores ndiwo muvengi wako mukuru kana iwe uchitsvaga kugona kwesimba uye nehurefu hwebhatiri hupenyu. Kune rimwe divi, kana izvo zvaunoda kuri kuita, saka tsvaga maprosesa ane aya epamusoro maitiro.
Nenzira, kana zvasvika pakusimudza iyo CPU, vazhinji vagadziri vanosarudza kuisa chete Mhando dzemafoni, ndiko kuti, yakanangana nemalaptop ane yakaderera kushandiswa uye zvishoma kudzikisa kupisa kupisa. Asi kune zvekare izvo zvinosanganisira izvo zvakafanana zvinhu zvakagadzirirwa makomputa emakomputa, ane akakwidziridzwa epamusoro uye ayo anopisa, kunyanya makomputa emitambo asingatarise zvakanyanya nezve kugona uye chakakosha kuita.
Nyaya ya ruoko, Ini handidi kukurudzira rudzi urwu rwema processor kunyangwe kugona kwavo kwakanaka uye kushandisa / kuita kunokanganisa. Ivo vachiri kumashure mukuita kupfuura iwo maIntel uye AMD mamodheru, uye inogona kunge iri dambudziko hombe kana zvasvika pakutora software inoenderana neichi chivakwa, kunyangwe paine zvakawanda uye nekuwedzera.
La RAM memory inokoshawo zvikuru. Kwete kungoita chinzvimbo, icho chinofanirwa kunge chakatenderedza 4GB, 8GB, nezvimwe, zvinoenderana nezvinodiwa. Zvakare tekinoroji, iyo isingafanire kufanotungamira-zuva DDR3 kuti ikurumidze kuendesa. Asi zvisinei neizvi, isu tinogona kuita imwe monologue chete nehunhu hwe RAM kana iyo CPU, chinhu chakanyanya kukosha, kana zvirinani ndinochiona nenzira iyoyo, ndiyo huwandu hwema module akaiswa uye emahara slots eiyo laptop, nekuti kana zvisiri zvakakwana RAM, mune ramangwana unogona kuiwedzera nekuwedzera imwe module.
La GPU, kunyangwe ichibva ku AMD kana NVIDIA sarudzo mbiri dzakanaka. Muzviitiko zvakawanda, mhando dzemafemu aya dzinowanzo kwana kushandiswa kwakawanda. Chete kana iwe uchida iyo yakasarudzika Laptop yemitambo, simulation kana graphic dhizaini iwe unofanirwa iwe kutarisisa zvakanyanya kune iwo mamodheru uye maficha, kusanganisira huwandu hweVRAM ndangariro. Zvandaizokukurudzira kuti udzivise maIntel GPUs, iyo Intel Graphics HD haina kusvika pamatanho ekare uye unogona kuve nematambudziko akakomba nekuita kwavo.
Uye kana iwe wakasarudza Intel processor kana iyo AMD APU, iyo inosanganisa makadhi emifananidzo, pamwe kana uchizovashandisa kufambisa Internet, hofisi otomatiki, uye zvinhu zvakadaro, ivo vanozokwana kupfuura zvakakwana. Asi kana iwe uchida zviwanikwa zvakati kwirei, ita shuwa kuti pamusoro peiyo yakabatanidzwa iwe une zvakare Akazvitsaurira GPU.
ari HDD ipa yakakwira chinzvimbo pamitengo yakanaka, kunyangwe kana kumhanya kwavo kwakaderera pane iyo SSD. Kune rimwe divi, maSSD ane akanakisa kumhanya pamitengo yepamusoro zvakanyanya kana tichienzanisa masimba akafanana neana HDDs. Kune mushandisi akajairwa HDD inogona kukwana, asi kune yepamusoro zvakanyanya zvingave zvakanaka kuve neSSD yekukwirisa mashandiro, kana kunyange mamwe malaptop anosanganisira zvese SSD neHDD, ichibatanidza zvakanakisa zvepasirese nyika.
Kusarudza chinzvimbo, chokwadi ndechekuti icho chinhu chaicho chaicho, vamwe vanhu vane 500GB vanozokwana, vamwe vachazoda 1TB kana zvimwe, nezvimwe. Uye kana iwe uchida kuziva chimwe chinhu nezve izvo zvigadzirwa, mune iyo SSD pane kazhinji hune hunhu hwakanaka nema brand Intel, Samsung, Crucial, nezvimwe, asi kune iyo magnetic-mechanical HDD zvinhu zvinoshanduka, sezvo Western Dhijitari uye HSGT iri kuratidza kutendeka kwakanaka kwazvo. Takatarisana nenjodzi munguva pfupi yapfuura, chimwe chinhu icho Seagate yaishandisa kuzvitonga.
ari mabhatiri iwe unogona kuwana zvimwe kana zvishoma Li-Ion / Li-Po masero. Iwe hauchazowana mabhatiri erumwe rudzi asiri lithiamu, uye sarudzo yakanyanya kubva pane zvaunoda. Kana, semuenzaniso, iwe uchifamba zvakawanda uye uchitora laptop yako kunze, iwe uchazoda kuzvimiririra kwenguva yakareba kuitira kuti bhatiri rinotora maawa gumi nemana kana gumi nerimwe uye rinokutendera kuti ushande usina kubatana. Kune rimwe divi, vazhinji seni vanoshandisa iyo laputopu kumba, padhuze nekubatana kune yemagetsi network uye ndiko kushoma ...
Usatenderedzwa nemaseru futiSezvo bhatiri rine X maseru rinogona kugara risingasviki rimwe riine zvakapetwa kaviri nekuda kwehardware iri kuita simba.
El Screen size inewo zvemunhu. Kana iwe uchida komputa yemavhidhiyo emavhidhiyo, dhizaini, yekambani yako, kuona mabhaisikopo, nezvimwe, zvakanakisa kuwana 15 kana 17 ″ skrini, yakaderera pane iyo yaisazokodzera. Kune rimwe divi, kune kumwe kushandiswa kana kufamba kukuru, iyo 11 ″ inogona kunge yakanaka. Kugadziriswa kwakasungirirwa kune saizi screen uye GPU. Kana yako GPU iri yepakati uye iyo skrini iri hombe kwazvo, resolution yacho inogona kunge yakadzikira. Kunyangwe kutaura chokwadi, maGPU aripo akawandisa kupfuura zvinokwaniswa pamalaptop skrini. Chisarudzo chakakodzera chingave:
10-12 " 1024 × 768 kana kupfuura
12-15 " 1366 × 768 kana kupfuura
Zvinopfuura gumi neshanu " Haimbofi yakaderera pane 1920 × 1080
Kana ari Screen Type, kune matafura kana uchida. Asi ini ndaizotarisa zvakanyanya pakuongorora mhando yetekinoroji yakavakirwa nepaneru:
LCD: Aya ndiwo maratidziro emakristaro emvura anopa mifananidzo yakajeka uye echokwadi mavara ane mhando yakanaka.
akatungamirira: zvikwangwani zvine LED zvinopa kuita kwakanaka kwazvo, ine simba rakanaka rekushandisa kuchengetedza bhatiri. Kuswedera kwema LED uye kuwanda kwavo, zvinova izvo zvinogadzira mavara emapikiseli, zvinokanganisa kugadziriswa uye hunhu hwemufananidzo ... Semuenzaniso, nhasi tinogona kuve neH Full HD, 4K, nezvimwewo, zvikwangwani zvine resolution zvakanyanya kugona.
Chimwe chinhu chakakosha cheiyo skrini chingave icho nguva yekupindura kuyerwa mumamiriseconds (ms), iyo yakaderera zviri nani, kunyanya kune vatambi. Uye pakupedzisira, iyo ratio chiyero inogona zvakare kukufarira, kunyangwe mazhinji malaptop atouya ne16: 9, ndiko kuti, yakafara uye mashoma masikirini akareba achienzaniswa neyekare aive akaenzana mativi.
Ini ndatozivisa chimwe chinhu pamusoro pezvinhu. Zvishandiso hazvina kukosha chete mukugadzirwa kana kuvhunduka kusagadzikana, zvakare chikamu chakakosha chehurongwa hwekutonhora, uye kuti mumidziyo midiki yakadaro (kunyanya muma ultrabooks) yakakosha. Alloys magnesium kana aluminium Ivo vanokupa iwe yakapfava, isina kuremara yekupedzisa uye yakanaka kupisa kupisa chishandiso nekushandura iyo yese kesi kuita huru heatsink. Kune rimwe divi, zvigadzirwa zvepurasitiki zvinogona kukonzera kutonhora kwakashata, zvichikanganisa mashandiro emidziyo uye zvakare kupfupisa hupenyu hwezvinhu zvacho ...
La Linux Hardware kuenderana Hazvisi izvo zvazvaimbove, nokudaro unogona kutenga chero chero laptop usingatarise zvakanyanya nezvehunhu hwayo uye kuti zvese zvinoshanda zvinomhanya zvakakwana pane GNU / Linux masystem. Uye zvakare, kazhinji, mazhinji evakuru vevanogadzira malaptop vatobatanidza rutsigiro uye kurodha zvikamu nemadhiraivha emidziyo yavo zvakare yeLinux kernel. Zvisinei, yeuka kuti chinonyanya kuzivikanwa kana chakakurumbira chigadzirwa chiri, irinani rutsigiro iwe rwaunowana. Ndiri kureva, pamwe pane mamwe maronda asingazivikanwe kana imwe yeirder Hardware iyo isati yave nemutyairi weLinux, saka vadzivise ...
Asi ini ndinoomerera, haufanire kunge uine dambudziko. Uye kana uine kusahadzika, unogona kugara uchitenga malaptop ayo anoto sanganisira yemahara software uye pre-yakaiswa GNU / Linux kugovera, senge iwo e Slimbook kana UAV. Nemhando iyi yemidziyo chero kusahadzika kwakadzingwa uye kwete izvozvo chete, urikudzivirirawo kubhadhara imwe mutengo kuti uwane rezinesi reMicrosoft Windows rausiri kuzoshandisa kana uri kufunga nezvekubvisa uye kuisa Linux. Zvakare, yeuka kuti kana iwe ukaita izvo, iwe unogona kutyora zvimwe zvibvumirano zvewaranti uye nekuzvityora.
Ndinovimba mutungamiriri wedu akubatsira iwe kuti utenge kutenga kwako kunotevera. Usakanganwa kuenda makomendi ako nekusahadzika, mazano, nezvimwe....
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Nhungamiro: sei kusarudza laptop
Zvakanaka, chii chaunoda kuti ndikuudze, iripi desktop desktop, iyo inopa 1000 laps yakajairika pane yakanakisa laptop, ngatishande zvese zvatinoda nekomputa uye patinoenda kunze uko, kuti tinakirwe. Ndine phenom II 955 komputa ine gumi nemaviri gigs yandinogona kushandisa sevha pasina matambudziko, ikozvino ndipe itsva 12 euro laptop uye kana ndikaishandisa kutamba mitambo kana sevha inogara kwemwedzi. Kushatirwa zvechokwadi.
rafa bakatwa akadaro
Ini zvakare ndine desktop yekushanda zuva nezuva, asi ini ndinodawo laptop nekuti dzimwe nguva ndinofanira kushanda kunze ... uye iyo yandinayo izvozvi ndinofanira kumutsiridza munguva pfupi.
Huya, chimwe chinhu hachibvise chimwe icho.
Kune vamwe vanhu vasina nzvimbo yekushandira yakamisikidzwa uye kuve ne desktop haisi sarudzo.
Pindura kuRafa pfumo
Mune laptop, zvinhu zvitatu zvinoita kunge zvakakosha kwandiri: bhatiri, yakakwana RAM uye SSD yekumhanyisa. Ini handione yakanaka graphic inodikanwa kwazvo, nekuti ye graphic dhizaini uye / kana budiriro, sezvavanotaura, ini ndinofarira desktops,
Kevin Tanza akadaro
Ndinokutendai neruzivo rwamakapa; chokwadi ndechekuti ini ndanga ndichitsvaga kutenga komputa uye ndaida kuve nekukoshesa kukuru kwezvandaifanira kuita; Ndinovimba izvozvi kushandisa ruzivo urwu munzira yakanakisa hahahaha kwaziso.
Pindura kuna Kevin Tanza
Victor Manuel akadaro
Ndine desktop uye laptop uye izvo zviviri zvinoenderana. Ndishevedze ndisinganzwisisike asi chimwe chinhu chandinoona mulaptop ndechekuti pane mukana wekurangarira uye zvakaoma dhisiki zvinhu, ini ndinogara ndichizvitsvaga kuti ive nerusununguko rwemahara ekuwedzera ekuwedzera uye nzvimbo yechipiri hard disk (kana kuisa imwe mukati CD yemuverengi) uye semashoko ekupedzisira ekuti iwe unogona kubvisa bhatiri kana rikapisa kana iwe uchida kuva nesipare uye uchazoshandisa zvakanyanya laptop yacho.
Iye zvino vatora kukomberedza iyo yakazara laptop mune yakavharwa kamuri uye ini ndinofanirwa kumisikidza masikisi kuti ndipinde mukati. Izvi zvinoitikawo kune mbozhanhare, havadi kuti tichinje zvikamu kuitira kuti titenge imwe munguva pfupi.
Pindura kuna Victor Manuel
Cryptocurrency kwemigodhi zviri pamutemo kuCanonical